ပါကင်ဖွင့်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါဆေးဝါးများကိုယ်ကျင့်တရားစီရင်တော်မူခြင်းပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်, လေ့လာမှုပြပွဲ - သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ပါကင်ဖွင့်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါဆေးဝါးများကိုယ်ကျင့်တရားစီရင်တော်မူခြင်းပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်, လေ့လာမှုပြပွဲ” ဟန္န Devlin သိပ္ပံသတင်းထောက်ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 2nd ဇူလိုင်လအပေါ်များအတွက် 2015 18.26 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
စိတ်ကျရောဂါနှင့်ပါကင်ဆန်များအတွက်ဘုံမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအခြားသူများကိုထိခိုက်နစ်နာအောင်အကြောင်းလူတွေရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားစီရင်ပိုင်တော်မူ၏ယိမ်းနိုင်, မူးယစ်ဆေးများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမေးခွန်းထုတ်ကြောင်းသုတေသနများအရသိရသည်.
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုကျန်းကျန်းမာမာကလူကျယ်ပြန့်သူတို့အခြားသူများအားပိုမိုအကာအကွယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်စိတ်ကျရောဂါကုသတဲ့ serotonin-တိုးမြှင်မူးယစ်တစ်ဦးတည်းချွတ်ဆေးထိုးအပ်ပေးတော်မူသောအခါတွေ့ရှိ, တစ်ဦးဓါတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုတစ်ခုလျှပ်စစ်ရှော့ခ်လက်ခံရရှိသူတို့ကိုတားဆီးဖို့နီးပါးနှစ်ကြိမ်အဖြစ်တာကိုပေးဆောင်. သူတို့ကအစနာကျင်ခြင်းငှါမိမိတို့ဖော်ထုတ်ဖို့ပိုတွန့်ဆုတ်ဖြစ်လာခဲ့သည်.
Related: ဦးနှောက်၏ serotonin မြေပုံပိုကောင်းလျာထားသောစိတ်မကျဆေး Antidepressants ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်
အဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင်များလည်း dopamine-enhancing ပါကင်ဆန်မူးယစ်ဆေးတွေ့ရှိ, levodopa, ကျန်းမာတဲ့လူကပိုတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်လုပ်, လျှပ်စစ်ရှော့ခ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ခံယူဖို့ပိုနှစ်သက်ဖို့ပုံမှန်စိတ်သဘောထားထုတ်ရှင်းလင်း, သူတို့ကိုပတ်လည်မှာသူတို့အကြဲစဉ်.
Molly Crockett, အလုပျဦးဆောင်ခဲ့သူအောက်စဖို့တက္ကသိုလ်မှစိတ်ပညာရှင်တစ်ဦး, မူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့တစ်ခုတည်းထိတွေ့မှုအပြုအမူအပေါ်ထိုကဲ့သို့သောသိသာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်သောတွေ့ရှိချက်ကျွန်တော်တို့တည်ငြိမ်တဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားစံတန်ဖိုးများရှိသည်သောစိတ်ကူးစိန်ခေါ်ပြောပါတယ်.
"လူနာများ [ဒီဆေးတွေကိုယူပြီး] သူတို့၏လက္ခဏာများတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဘယ်လို၏စည်းကမ်းချက်များ၌ခြေရာခံနေကြတယ်, ဒါပေမယ့်မလိုအပ်သူတို့၏အမူအကျင့်ပြောင်းလဲဘယ်လောက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌,"ဟုသူမကဆိုသည်. "ပါကင်ရဲ့ကုသမှုထဲမှာ, အချို့သောလူနာ compulsive လောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အပေါ်သွား. အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးများလူနာထက်ကျော်လွန်ဤလောကသို့ထွက်ရောက်ရှိကြောင်းအကျိုးဆက်များရှိသည်။ "
သူမသည်ကြောင့်လေ့လာမှုတွင်တွေ့မြင်သက်ရောက်မှုလူနာအတွက်ပုံတူကူးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းရှိမရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးခဲ့သည်ကဆက်ပြောသည်. တစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်ခြေမူးယစ်ဆေးဝါးများကသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်တည်ငြိမ်နေဖြင့် "နောက်ကျောအခြေခံဖို့" လူနာများ၏အမူအကျင့်ကိုဆောင် ခဲ့. နိုင်ဖို့ပါပဲ.
လေ့လာမှုမှာ, ဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ Current Biology, 175 သင်တန်းသားများကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ, အတူ 89 Anti-စိတ်ကျရောဂါ citalopram သို့မဟုတ်တစ် placebo လက်ခံရရှိရန်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့် 86 levodopa သို့မဟုတ်တစ် placebo ဖြစ်ဖြစ်ပေးထား.
အဆိုပါသင်တန်းသားများလည်းကျပန်း "deciders" သို့မဟုတ် "အသံဖမ်း" အဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်အမည်ဝှက်ဖွင့်တွဲဖက်ခဲ့ကြ. ပြင်းထန်မှုသည်းမခံနိုင်သောမဟုတ်ခဲ့နိုင်အောင်အားလုံးသင်တန်းသားများကိုအနည်းငယ်နာကျင်လျှပ်စစ်လှုပ်၎င်းတို့၏နာကျင်မှုတံခါးခုံကိုမှလိုက်ဖက်ပေးခဲ့. Deciders အသံဖမ်းမှလှုပ်ခြင်းကို receiver ၏ကိုယ်ပိုင်နာကျင်မှုခုံမှာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်.
Deciders ကွန်ပျူတာ terminal ကိုအတူတယောက်တည်းနေတဲ့အခန်းသို့သွားလေ၏, အသီးအသီးတစ်ဝိုက်အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ 170 စမ်းသပ်မှုတွေ. အသီးအသီးအဘို့အရုံးတင်စစ်ဆေး, သူတို့လှုပ်ခြင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောနံပါတ်များအဘို့ပိုက်ဆံ၏ကွဲပြားခြားနားသောပမာဏအကြားရွေးချယ်ဖို့ခဲ့, ဦးရေအများဆုံးတက် 20 လှုပ်နှင့်ရုံးတင်စစ်ဆေးနှုန်း£ 20. ဥပမာအားဖြင့်, သူတို့တစ်ဦးရှေးခယျြမှုတို့ကိုပူဇော်ကြ၏စေခြင်းငှါ7£ 10 သို့မဟုတ်အဘို့အလှုပ် 10 £ 15 လှုပ်ခြင်း. အလက်ခံဘို့အလှုပ်ခြင်းငှါမိမိတို့နှင့်တစ်ဝက်အဘို့အလှုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စုံစမ်းခြင်း၌ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ထက်ဝက်, ဒါပေမဲ့မခွဲခြားဘဲအလှုပ်ကိုလက်ခံရရှိသူ, အ deciders ငွေကိုရလိ​​မ့်မယ်.
ပျှမ်းမျှတွင်, တစ်ဦး placebo ပေးသောလူအခြားသူများအားအန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန်မိမိတို့ကိုယ်နှင့်ထိတ်လန်နှုန်း 44p မှထိခိုက်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ထိတ်လန်နှုန်း 35p ပတ်ပတ်လည်ဆပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားခဲ့ကြ. citalopram အပေါ်သူများသည်, အ seratonin-based မူးယစ်, ပို. အန္တရာယ်-ဆန္ဒရှိခဲ့ကြ, အခြားသူများအားအန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန်မိမိတို့ကိုယ်နှင့်ထိတ်လန်နှုန်း 73p မှထိခိုက်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ထိတ်လန်နှုန်းပျမ်းမျှ 60p ဆပ်ဖို့ဆန္ဒရှိ. ယေဘုယျအား, သူတို့ပတ်ပတ်လည်ကိုအပ် 30 သူတို့ကိုယ်သူတို့မှနည်းပါးလာလှုပ်ခြင်းနှင့် 35 placebo အပေါ်တွေထက်အခြားသူများအားနည်းပါးလာလှုပ်ခြင်း.
levodopa ပေးသောပြည်သူ့, သို့သော်, သူတို့ကိုယ်သူတို့မှလှုပ်ခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ထက်အခြားသူများအားလှုပ်ခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့နောက်တဖန်ဆပ်ဖို့ဆန္ဒရှိကြဘူး. ပျှမ်းမျှတွင်, သူတို့ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်အခြားသူများအားအန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 35p ရှော့ခ်နှုန်းပေးဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားခဲ့ကြ, သူတို့ပျမ်းမျှကယ်နှုတ်တော်မူ၏အဓိပ္ပာယ် 10 အ placebo အုပ်စုထက်စမ်းသပ်မှုကာလအတွင်းအခြားသူများအားပိုမိုလှုပ်ခြင်း.
"ဒီ dopamine မူးယစ်လူကပိုတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်လုပ်,"Crockett ကပြောပါတယ်. "လူအများစုကသူတို့မိမိကိုယ်ကိုထိခိုက်စေခြင်းထက်တခြားလူကိုထိခိုက်စေရန်ပိုမိုဆိုးရွားမယ့်ထင်ဘယ်မှာဒီပုံစံကိုပြသ. ဒါကမူးယစ်အားဖြင့်ဖျက်သိမ်းပါတယ်။ "
အဆိုပါသုတေသီများသည်အနာဂတ်၌လူတို့သည်မိမိတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချအပြုအမူအခြေခံကျကျတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးအားဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့ရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်မှုပေးဖို့ဖြစ်နိုင်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြု, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သူတို့၏စိတ်ဓါတ်များနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများတိုးတက်ခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ထိုသူတို့တောင်း.
"ကျနော်တို့ကကဲ့သို့သောရာဇဝတ်မှုသို့မဟုတ်ဘာမှသို့ကျန်းမာတဲ့လူတစ်ဦးကနေသူတစ်ဦးဦးပြောင်းလဲမဟုတ်ပါဘူး,"Crockett ကပြောပါတယ်. "ဒါပေမဲ့စုစုပေါင်းငါတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမျိုးစုံကိုကြိမ်တနေ့လုပ်သူတို့သည်ငါတို့ဘဝတွေကိုပုံဖော်နိုင်တယ်။ "
ဤဆောင်းပါးသည်သောကြာနေ့တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့3ဇူလိုင်လ. ဒါဟာမှားယွင်း ecstasy ဆေးပြားတစ်ဦးဓာတ်ပုံနှင့်အတူသရုပ်ဖော်ခဲ့. ဒီပုံမှာကိုပြောင်းလဲခဲ့.
29179	0 အပိုဒ်, ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်, မူးယစ်ဆေးဝါး, ဟန္န Devlin, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနများ, neuroscience, သတင်း, Parkinson ရောဂါ, သိပ္ပံ, Society က
← Amazon Kindle Paperwhite 2015 ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: သေး sharpest နှင့်အကောင်းဆုံး 20 အကောင်းဆုံးအသစ် iPhone နှင့် iPad app များကိုနှင့်ဂိမ်းများယခုအပတ် →